ရောဘတျဆနျ နဲ့ တီယာနေး ဘယျသူ ပိုကောငျးသလဲ ဆိုတာ နှိုငျးယှဥျလိုကျတဲ့ ဂြှနျဟတျဆနျ - SPORTS MYANMAR
ရောဘတျဆနျ နဲ့ တီယာနေး ဘယျသူ ပိုကောငျးသလဲ ဆိုတာ နှိုငျးယှဥျလိုကျတဲ့ ဂြှနျဟတျဆနျ
ဂြှနျဟတျဆနျ က အာဆငျနယျ အသငျး ပွီးခဲ့တဲ့ နှရောသီက ချေါယူခဲ့တဲ့ ကစားသမား ကီရနျတီယာနေးဟာ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ကွီးမားတဲ့ အောငျမွငျမှု ရရှိလိမျ့မယျလို့ ထောကျခံလိုကျပွီး အာဆငျနယျ ဘယျနောကျခံလူဟာ လီဗာပူးရဲ့ အနျဒီရောဘတျဆနျထကျ ခံစဈ ကစားပုံ ပိုမို ကောငျးမှနျတယျလို့ ဆိုလိုကျပါတယျ။ အသကျ ၂၂ နှဈအရှယျ တီယာနေးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ သွဂုတျလက ဆဲလျတဈမှ အာဆငျနယျ ကို ပေါငျ ၂၂ သနျးနဲ့ ပွောငျးလာခဲ့တာ ဖွဈပမေယျ့လညျး အူကရြောဂါ ခှဲစိတျမှု ခံယူ ထားခဲ့ရာ ကနေ မကွာသေးမီကမှ သကျသာ လာခဲ့တာကွောငျ့ ကလပျ အသငျးသဈ အတှကျ ၂ ပှဲသာ ကစား ထားရပါသေးတယျ။
ဒါပမေယျ့ အာဆငျနယျ လူငယျကွယျပှငျ့ဟာ ပါဝငျ ကစားခှငျ့ ရထားတဲ့ ပှဲတိုငျး ခွစှေမျးပွ ကစား နိုငျခဲ့ပွီး ပွီးခဲ့တဲ့ တဈပတျက အာဆငျနယျ အသငျး စတနျးဒကျလိဂျအသငျးကို ၄ ဂိုးပွတျနဲ့ အနိုငျရခဲ့တဲ့ ယူရိုပါလိဂျ ပှဲစဥျမှာ တိုကျစဈမှုး မာတငျနယျလီရဲ့ ဂိုးအတှကျ ဖနျတီးပေး ခဲ့ပါတယျ။ တီယာနေးဟာ နိုငျငံတကာ ပှဲစဥျ ကာလအတှငျး အာဆငျနယျ အသငျးမှာ ဆကျရှိ နမှော ဖွဈပွီး နညျးပွ အူနိုငျးအမျမရီကလညျး စကော့တလနျ လကျရှေးစငျ အနနေဲ့ လာမညျ့ ရှကျဖီးယူနိုကျတကျ နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲမတိုငျမီ ၎င်းငျးရဲ့ ကွံ့ခိုငျမှု level ကို မွှငျ့တငျရနျ အလို ရှိခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
တီယာနေး လိုပဲ ကစားသမား ဘဝမှာ အာဆငျနယျ နဲ့ ဆဲတဈတို့မှာ ကစားခဲ့တဲ့ ဟကျဆနျက အာဆငျနယျ ဘယျနောကျခံလူ ဟာ အမျးမရိတျမှာ ကွယျပှငျ့ တဈဦး ဖွဈလာ လိမျ့မယျလို့ မှတျခကျြပေး လိုကျပါတယျ။ ဝေးလျလကျရှေးစငျဟောငျးက တီယာနေး ဟာ ခံစဈပိုငျး နဲ့ ပကျသကျရငျ ရောဘတျဆနျထကျ ပိုကောငျးတဲ့ သူလို့ ယုံကွညျ နပေါတယျ။
ဟတျဆနျက “လူတှကေတော့ အနျဒီရောဘတျဆနျ အကွောငျး ပွောနကွေ ပါတယျ။ ကြှနျတျော ပွောခငျြတာက ရောဘတျဆနျ ဟာ ဒီအခြိနျမှာ ဘောလုံး ပေးပို့မှု ပိုမို ကောငျးမှနျတဲ့ ကစားသမား ဖွဈပမေယျ့ ကီရနျ ဟာ ခံစဈ ကစားရမှာ ပိုမို ကောငျးမှနျတဲ့ ကစားသမားပါ။ ကီရနျဟာ ခံစဈကို အကောငျးဆုံး ကစား နိုငျသူပါ။ သူဟာ လိုအပျရငျ wing-back မှာလညျး ကစား နိုငျစှမျး ရှိသူပါ။
အနျဒီရောဘတျဆနျ ဒနျဒီးယူနိုကျတကျမှာ ကစား ခဲ့တဲ့ ပှဲကို ကြှနျတျော ကွညျ့ဖူး ခဲ့ပါတယျ။ ကြှနျတျော အဲဒီအခြိနျက commentator လုပျခဲ့တာ ဖွဈပွီး သူဟာ တကယျ ကောငျးခဲ့ပါတယျ ။ အဲဒီနောကျ သူ ဟူးစီးတီးကို ပွောငျးရှေ့ သှားခဲ့ပွီး အဲဒီမှာ သူ့ကစားသမား ဘဝဟာ အဖြားရှုး သှားခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီနောကျ လီဗာပူးဟာ သူ့ကို ပေါငျ ၁၀ သနျးနဲ့ ချေါယူ သှားခဲ့ပွီး သူအခု တောကျပ နပေါတယျ။
တီယာနေး ကလညျး အာဆငျနယျ မှာ အထိုငျကြ သှားတာနဲ့ သူ ကောငျးကောငျး လုပျနိုငျမှာပါ။ ဘယျသူမှ အသငျးသဈကို ဒဏျရာ ပွသနာနဲ မသှားခငျြသလို မကစား ရတာလညျး မလိုခငျြ ပါဘူး။ တီယာနေးဟာ ဂုဏျယူစရာ ကောငျးတဲ့ ကောငျလေး ဖွဈပွီး သူဘယျလောကျ ကောငျးသလဲ ဆိုတာကို အားလုံးကို သကျသေ ပွခငျြ နမှောပါ။ သူဟာ ပေါငျ ၂၅ သနျး တနျကွေး ရှိပါတယျ။ အခွားလိဂျတှေ မှာဆိုရငျ သူဒီထကျ တနျကွေး မွငျ့မှာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ စကော့တလနျလိဂျဟာ သိပျကောငျးတဲ့ လိဂျ မဟုတျဘူး ဆိုတဲ့ အယူအဆကွောငျ့ပါ။” လို့ ဆိုသှားပါတယျ။
ဟတျဆနျက တီယာနေး အတှကျ အာဆငျနယျ တို့ အသုံးပွု ခဲ့တဲ့ ပေါငျ ၂၅ သနျး ဆိုတဲ့ ငှကွေေးဟာ တကယျ့ကို လြော့စြေးနဲ့ ရလိုကျတယျ ဆိုတာကို စကော့တလနျသား ဘကျက သကျသပွေ လိမျ့မယျလို့ မှတျခကျြပေး သှားပါတယျ ။
ဟတျဆနျက “မနျယူနိုကျတကျ အသငျး အာရှမျဝမျဘဈဆာကာ အတှကျ ပေါငျ သနျး ၅၀ အသုံးပွု ခဲ့တာကို ကွညျ့ရငျ အာဆငျနယျ ဟာ စြေးခြိုခြို နဲ့ ရလိုကျတာ ဖွဈတယျလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။ ယနေ့ စြေးကှကျမှာ သာမနျ ကစားသမားတှေ ကိုတောငျ ပေါငျ သနျး ၃၀ ၄၀ ပေးနရေပွီး တီယာနေးဟာ သာမနျ ကစားသမား မဟုတျပါဘူး ။ ဆဲတဈ အနနေဲ့ နောကျထပျ ပေါငျ ၅သနျးလောကျ ထပျရဖို့ ရှိနပေမေယျ့ သူ့အတှကျ ဒီလောကျ ရတာလညျး သိပျတော့ မဆိုးပါဘူး။ အကွောငျးက တီယာနေးဟာ လူငယျအသငျးကနေ ထှနျးတောကျ လာခဲ့ပွီး ဆဲတဈတို့ တဈပွားမှ ပေးပွီး ချေါခဲ့တာ မဟုတျလို့ပါ ။” လို့ ပွောသှားပါတယျ ။
ဆကျလကျပွီး ဟတျဆနျက “သူဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ကွာသာပတေးနကေ့ တဈစုံတဈခု လုပျဖို့ ကွိုးစား နတေဲ့ အသငျးအတှကျ ဒုတိယမွောကျ ပှဲထှကျခှငျ့ကို ရခဲ့ပါတယျ။ အမျမရီဟာ တဈစုံတဈရာ စပယျရှယျ ဖွဈဖို့ သူ့အသငျးကို တညျဆောကျ နတောပါ။ သူတို့ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ နှဈပိုငျးအတှငျးက ကှငျးသဈ တညျဆောကျ ခဲ့တာကွောငျ့ ငှကွေေး သုံးစှဲမှု အပိုငျးမှာ အကနျ့အသတျတှေ ရှိခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အာဆငျနယျ ဟာ ဒီနှရောသီမှာ ပီပီအတှကျ ၇၂ သနျး ၊ တီယာနေး အတှကျ ၂၅ သနျး အသုံးပွု ခဲ့ပွီး ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီအခြို့က လကျကာဇကျအတှကျ ပေါငျ ၅၂ သနျး သုံးခဲ့ပါတယျ။
အာဆငျနယျ ဟာ လမျးကွောငျးမှနျပျေါမှာ ရှိနပေါတယျ ။ သူတို့ Top4ဝငျဖို့ အတှကျ ရညျမှနျးနပွေီး ခြဲလျဆီးတို့ အပွောငျးအရှေ့ ပိတျပငျ ခံထား ရတာကွောငျ့ လူချေါလို့ မရတာကို အခှငျ့​ကောငျး ယူနိုငျ ပါလိမျ့မယျ။ စပါးကို ကွညျ့လိုကျပါ။ သူတို့မှာ စာခြုပျကုနျ တော့မယျ့ ကစားသမားတှနေဲ့ ရှုပျထှေး နတေဲ့ အပွငျ ဒယျလီအလီ ကလညျး ပုံစံကောငျး ပြောကျနပေါတယျ။ သူတိူ့ မနျနဂြော ပြျောရှငျ နပေမလား? သူတို့ဟာ အနညျးငယျ ကသောငျးကနငျး ဖွဈနပွေီး အာဆငျနယျ ဟာ Top4နရော အတှကျ အစှမျးကုနျ အားထုတျ နမှောပါ။” လို့ ဆိုသှားပါတယျ။
ရောဘတ်ဆန် နဲ့ တီယာနေး ဘယ်သူ ပိုကောင်းသလဲ ဆိုတာ နှိုင်းယှဉ်လိုက်တဲ့ ဂျွန်ဟတ်ဆန်
ဂျွန်ဟတ်ဆန် က အာဆင်နယ် အသင်း ပြီးခဲ့တဲ့ နွေရာသီက ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ ကစားသမား ကီရန်တီယာနေးဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ကြီးမားတဲ့ အောင်မြင်မှု ရရှိလိမ့်မယ်လို့ ထောက်ခံလိုက်ပြီး အာဆင်နယ် ဘယ်နောက်ခံလူဟာ လီဗာပူးရဲ့ အန်ဒီရောဘတ်ဆန်ထက် ခံစစ် ကစားပုံ ပိုမို ကောင်းမွန်တယ်လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။ အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ် တီယာနေးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လက ဆဲလ်တစ်မှ အာဆင်နယ် ကို ပေါင် ၂၂ သန်းနဲ့ ပြောင်းလာခဲ့တာ ဖြစ်ပေမယ့်လည်း အူကျရောဂါ ခွဲစိတ်မှု ခံယူ ထားခဲ့ရာ ကနေ မကြာသေးမီကမှ သက်သာ လာခဲ့တာကြောင့် ကလပ် အသင်းသစ် အတွက် ၂ ပွဲသာ ကစား ထားရပါသေးတယ်။
ဒါပေမယ့် အာဆင်နယ် လူငယ်ကြယ်ပွင့်ဟာ ပါဝင် ကစားခွင့် ရထားတဲ့ ပွဲတိုင်း ခြေစွမ်းပြ ကစား နိုင်ခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်က အာဆင်နယ် အသင်း စတန်းဒက်လိဂ်အသင်းကို ၄ ဂိုးပြတ်နဲ့ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ယူရိုပါလိဂ် ပွဲစဉ်မှာ တိုက်စစ်မှုး မာတင်နယ်လီရဲ့ ဂိုးအတွက် ဖန်တီးပေး ခဲ့ပါတယ်။ တီယာနေးဟာ နိုင်ငံတကာ ပွဲစဉ် ကာလအတွင်း အာဆင်နယ် အသင်းမှာ ဆက်ရှိ နေမှာ ဖြစ်ပြီး နည်းပြ အူနိုင်းအမ်မရီကလည်း စကော့တလန် လက်ရွေးစင် အနေနဲ့ လာမည့် ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲမတိုင်မီ ၎င်းရဲ့ ကြံ့ခိုင်မှု level ကို မြှင့်တင်ရန် အလို ရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တီယာနေး လိုပဲ ကစားသမား ဘဝမှာ အာဆင်နယ် နဲ့ ဆဲတစ်တို့မှာ ကစားခဲ့တဲ့ ဟက်ဆန်က အာဆင်နယ် ဘယ်နောက်ခံလူ ဟာ အမ်းမရိတ်မှာ ကြယ်ပွင့် တစ်ဦး ဖြစ်လာ လိမ့်မယ်လို့ မှတ်ချက်ပေး လိုက်ပါတယ်။ ဝေးလ်လက်ရွေးစင်ဟောင်းက တီယာနေး ဟာ ခံစစ်ပိုင်း နဲ့ ပက်သက်ရင် ရောဘတ်ဆန်ထက် ပိုကောင်းတဲ့ သူလို့ ယုံကြည် နေပါတယ်။
ဟတ်ဆန်က “လူတွေကတော့ အန်ဒီရောဘတ်ဆန် အကြောင်း ပြောနေကြ ပါတယ်။ ကျွန်တော် ပြောချင်တာက ရောဘတ်ဆန် ဟာ ဒီအချိန်မှာ ဘောလုံး ပေးပို့မှု ပိုမို ကောင်းမွန်တဲ့ ကစားသမား ဖြစ်ပေမယ့် ကီရန် ဟာ ခံစစ် ကစားရမှာ ပိုမို ကောင်းမွန်တဲ့ ကစားသမားပါ။ ကီရန်ဟာ ခံစစ်ကို အကောင်းဆုံး ကစား နိုင်သူပါ။ သူဟာ လိုအပ်ရင် wing-back မှာလည်း ကစား နိုင်စွမ်း ရှိသူပါ။
အန်ဒီရောဘတ်ဆန် ဒန်ဒီးယူနိုက်တက်မှာ ကစား ခဲ့တဲ့ ပွဲကို ကျွန်တော် ကြည့်ဖူး ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် အဲဒီအချိန်က commentator လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး သူဟာ တကယ် ကောင်းခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒီနောက် သူ ဟူးစီးတီးကို ပြောင်းရွေ့ သွားခဲ့ပြီး အဲဒီမှာ သူ့ကစားသမား ဘဝဟာ အဖျားရှုး သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် လီဗာပူးဟာ သူ့ကို ပေါင် ၁၀ သန်းနဲ့ ခေါ်ယူ သွားခဲ့ပြီး သူအခု တောက်ပ နေပါတယ်။
တီယာနေး ကလည်း အာဆင်နယ် မှာ အထိုင်ကျ သွားတာနဲ့ သူ ကောင်းကောင်း လုပ်နိုင်မှာပါ။ ဘယ်သူမှ အသင်းသစ်ကို ဒဏ်ရာ ပြသနာနဲ မသွားချင်သလို မကစား ရတာလည်း မလိုချင် ပါဘူး။ တီယာနေးဟာ ဂုဏ်ယူစရာ ကောင်းတဲ့ ကောင်လေး ဖြစ်ပြီး သူဘယ်လောက် ကောင်းသလဲ ဆိုတာကို အားလုံးကို သက်သေ ပြချင် နေမှာပါ။ သူဟာ ပေါင် ၂၅ သန်း တန်ကြေး ရှိပါတယ်။ အခြားလိဂ်တွေ မှာဆိုရင် သူဒီထက် တန်ကြေး မြင့်မှာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ စကော့တလန်လိဂ်ဟာ သိပ်ကောင်းတဲ့ လိဂ် မဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ အယူအဆကြောင့်ပါ။” လို့ ဆိုသွားပါတယ်။
ဟတ်ဆန်က တီယာနေး အတွက် အာဆင်နယ် တို့ အသုံးပြု ခဲ့တဲ့ ပေါင် ၂၅ သန်း ဆိုတဲ့ ငွေကြေးဟာ တကယ့်ကို လျော့ဈေးနဲ့ ရလိုက်တယ် ဆိုတာကို စကော့တလန်သား ဘက်က သက်သေပြ လိမ့်မယ်လို့ မှတ်ချက်ပေး သွားပါတယ် ။
ဟတ်ဆန်က “မန်ယူနိုက်တက် အသင်း အာရွမ်ဝမ်ဘစ်ဆာကာ အတွက် ပေါင် သန်း ၅၀ အသုံးပြု ခဲ့တာကို ကြည့်ရင် အာဆင်နယ် ဟာ ဈေးချိုချို နဲ့ ရလိုက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ယနေ့ ဈေးကွက်မှာ သာမန် ကစားသမားတွေ ကိုတောင် ပေါင် သန်း ၃၀ ၄၀ ပေးနေရပြီး တီယာနေးဟာ သာမန် ကစားသမား မဟုတ်ပါဘူး ။ ဆဲတစ် အနေနဲ့ နောက်ထပ် ပေါင် ၅သန်းလောက် ထပ်ရဖို့ ရှိနေပေမယ့် သူ့အတွက် ဒီလောက် ရတာလည်း သိပ်တော့ မဆိုးပါဘူး။ အကြောင်းက တီယာနေးဟာ လူငယ်အသင်းကနေ ထွန်းတောက် လာခဲ့ပြီး ဆဲတစ်တို့ တစ်ပြားမှ ပေးပြီး ခေါ်ခဲ့တာ မဟုတ်လို့ပါ ။” လို့ ပြောသွားပါတယ် ။
ဆက်လက်ပြီး ဟတ်ဆန်က “သူဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ကြာသာပတေးနေ့က တစ်စုံတစ်ခု လုပ်ဖို့ ကြိုးစား နေတဲ့ အသင်းအတွက် ဒုတိယမြောက် ပွဲထွက်ခွင့်ကို ရခဲ့ပါတယ်။ အမ်မရီဟာ တစ်စုံတစ်ရာ စပယ်ရှယ် ဖြစ်ဖို့ သူ့အသင်းကို တည်ဆောက် နေတာပါ။ သူတို့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ပိုင်းအတွင်းက ကွင်းသစ် တည်ဆောက် ခဲ့တာကြောင့် ငွေကြေး သုံးစွဲမှု အပိုင်းမှာ အကန့်အသတ်တွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အာဆင်နယ် ဟာ ဒီနွေရာသီမှာ ပီပီအတွက် ၇၂ သန်း ၊ တီယာနေး အတွက် ၂၅ သန်း အသုံးပြု ခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီအချို့က လက်ကာဇက်အတွက် ပေါင် ၅၂ သန်း သုံးခဲ့ပါတယ်။
အာဆင်နယ် ဟာ လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်မှာ ရှိနေပါတယ် ။ သူတို့ Top4ဝင်ဖို့ အတွက် ရည်မှန်းနေပြီး ချဲလ်ဆီးတို့ အပြောင်းအရွေ့ ပိတ်ပင် ခံထား ရတာကြောင့် လူခေါ်လို့ မရတာကို အခွင့်​ကောင်း ယူနိုင် ပါလိမ့်မယ်။ စပါးကို ကြည့်လိုက်ပါ။ သူတို့မှာ စာချုပ်ကုန် တော့မယ့် ကစားသမားတွေနဲ့ ရှုပ်ထွေး နေတဲ့ အပြင် ဒယ်လီအလီ ကလည်း ပုံစံကောင်း ပျောက်နေပါတယ်။ သူတိူ့ မန်နေဂျာ ပျော်ရွှင် နေပမလား? သူတို့ဟာ အနည်းငယ် ကသောင်းကနင်း ဖြစ်နေပြီး အာဆင်နယ် ဟာ Top4နေရာ အတွက် အစွမ်းကုန် အားထုတ် နေမှာပါ။” လို့ ဆိုသွားပါတယ်။